Sool: Wasaaradda Deegaanka Oo Bur-buriyay Dhuxul Fara Badan | Gabiley News Online
Sool: Wasaaradda Deegaanka Oo Bur-buriyay Dhuxul Fara Badan
Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland ayaa deegaamo ka tirsan gobolka Sool ka fulisay hawl gallo ay ku bur-buriyeen dhir badan oo la jaray oo Dhuxul laga shidayay.
Iyadoo maalmahan u danbeeyay ay wasaaradda deegaanka ka waday meello ka tirsan degmadda Xudun ee gobolka Sool hawl gallo lagula dagaalamayay Dhuxul fara badan oo la shiday iyo dhir la jaray.
Isku-duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland ee gobolka Sool Jaamac Xaaji Maxamuud Saalax, oo kaashanayay ciidamadda milateriga ee aagaasi ku sugan waxay maanta baabiiyeen goobo badan oo Dhuxul lagu shidayay.
Jaamac Xaaji Maxamuud Saalax, oo hawl galkaasi uga warbixiyay warbaahinta dawladda ee Somaliland ayaa digniin u diray cid kastoo ku hawlan shidista Dhuxusha iyo jarista dhirta, isla markaana tallaabo laga qaadi doono.
Waxaanu sheegay dadka caadaysatay ama hawshaa ku jira in tallaabo laga qaadi doono, isla markaana sharciga la hor gayn doonaa. Isagoona ugu baaqay bulshadda deegaanka Xudun in ay deegaankoodda ilaashadaan.
Isku-duwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sool waxa kaloo uu intaas raaciyay in aanay ugu tegin goobahaasi dadkii Dhuxusha shidayay oo ay meesha isaga yaaceen ka hor intii aanay ciidamadu gaadhin. Balse ay raadkoodda hayaan ayna garanayaan.
Geesta kale Jaamac Xaaji Maxamuud Saalax, in raggaasi Dhuxulaysatadda ah ay jareen dhirtii ay dadka iyo duunyaduba hadhsanayeen, isla markaana aanay kala soocin geed weyn iyo geed yar midnaba.
Jarista dhirtaasi noocyadda kala duwan isugu jirtay ee Dhuxusha laga shiday ayuu xasuuq iyo dabar-goyn ku tilmaamay isku-duwaha Sool.
Waxaanu sheegay in nolosha bulshadu ay dhirta ku tiirsan tahay, sidaas darteedna loo baahan yahay in dhirta la ilaaliyo.
Dhinaca kale isku-duwaha wasaaradda deegaanka ee Sool ayaa ugu baaqay maamulka degmadda Xudun, odayaasha iyo waxgaradka deegaanka in ay wasaaradda deegaanka kala shaqeeyaan la dagaalanka Dhuxusha, isla markaana meel kastoo ay ku arkaan ay ku soo wargeliyaan.